Howlgalo sarkaal iyo askar lagu dilay oo duleedka muqdisho ka dhacay. – Shabakadda Amiirnuur
October 27, 2020 5:31 pm by admin Views: 31
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Galabta Duleedka Muqdihso ku dishay Sarkaal ka tirsanaa Maamulka Gobalka Banaadir iyo Askar ka tirsanaa Dowladda Federaalka ah kadib laba howl gala is xigay oo qorshaysan.
Ibraahim Cali Coloow oo ahaa Gudoomiye Waaxeed ka tirsan Degmada Kaxda ee Gobalka Banaaadir ayaa lagu dilay inta u dhaxeysa Deegaanka Ceelasha Biyaha iyo Degmada kaxda waxaana lagala wareegay Gaari uu watay iyo bastoolad uu ku hubeysnaa.
Howlgalkaas waxaa fuliayay Ciidamo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ka war hayay dhaqdhaqaaqiisa una diyaarsanaa in ay khaarijiyaan.
Intaa kadib Ciidamo ka tirsan Dowladda Federalaka ah ayaa isku dayay in ay gurmad ku gaaraan halka Gudoomiye waaxeedka dhegta dhiiga loogu daray hase ahatee Ciidmada Xarakada Alshabab ayaa gurmadka qarax la beegsaday waxana halkaa ku le’day Ciidamada qaarkood iyadoo gaarigii ay sarnaayeena uu gubtay kadib markii qarax haleelay.
isu geyn dhimashada ooGudoomiye waaxeedku ku jiro inta la xaqiiyay waa 6 Qof inkastoo ay suura gal tahay in khasaaruhu intaas ka badan yahay.
Waxaa jira Ciidamo dhaawacmay marka dhimashada laga soo tago sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Howlgaladaan ayaa daba socda weeraro toos ah iyo dilal qorsheysan oo si is daba joog ah Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ula beegsato Shisheeyaha dalka ku sugan iyo xubaha iyo saraakiisha Soomaalida ah ee wada shaqeynta la leh.